Wararkii Ugu Danbeeyay Afduubka 70 Oday Oo Ku Maqan Gacanta Al Shabaab | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Wararkii Ugu Danbeeyay Afduubka 70 Oday Oo Ku Maqan Gacanta Al Shabaab
Wararkii Ugu Danbeeyay Afduubka 70 Oday Oo Ku Maqan Gacanta Al Shabaab
Odayaasha dhaqanka gobalka galgaduud ayaa saakay wada dadaalo xoogan oo lagu lagu hor fariisanayo hogaanka Al shabaab ee gobalka galgaduud, kadib markii maalmo ka hor ciidamo katirsan Al shabaab in ku dhaw 70 oday ay ka wateen duleedka magaalada Guriceel.
Jawiga deegaano katirsan gobalka Galgaduud ayaa ah saakay mid laga dareemayo dhaq dhaqaaqyo nabadeed oo ay doonayaan odayaasha dhaqanka gobalka in loo tago Madaxda Al shaaab ugu magacaaban gobalka Galgaduud oo odayaal gaaraya 70 ka watay Ceelka Galqoyaale oo qiyaas ahaan 130 Km u jira magaalada Guriceel ee gobalka Galgaduud.
Al shabaab ayaa inta badan gobalada ay ka maamulaan Dalka beelaha ku dhaqan ka qaada lacagaha loogu magacdaray Zakawaad, balse odayaasha dhaqanka deegaano katirsan gobalka Galgaduud ayaa ka dhaga adeegay baaqa Al shabaab ay soo saareen.
Deegaano katirsan gobalka galgaduud gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada Magaalada Xaradheere oo gacanta ay ku hayaan Al shabaab ayaa odayaasha ku dhaqan halkaasi, bilo ka hor sidaan oo kale uga dhag adeegay amarka Xoogaga Al shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal dhiig ku daatay oo markii danbe Xarakada loo ogolaaday waxii ay rabeen.
Waxii kusoo kordha waan waanta lagu doonayo in lagu soo sii daayo odayaasha gaaraya ilaa 70 oday ee ilaa hada aan la garan halka ay la aadeeen Ciidamo katirsan Xarakada Al shabaab.
Previous articleQaraxyo ka dhacay Kabul oo ay ku dhinteen 20 qof
Next articleDEG DEG: Ciidamada Dowladda Oo Magaalada Qoryooley Ka Dhax Baadi Goobaya Rag Katirsan Al Shabaab
Wakiiladii imtixaanka ee Hirshabeele oo Muqdisho dib ugu laabtay, amar kasoo...
max,ud Beyr - May 17, 2019 0